Efa am-perinasa tanteraka ireo mpanamboatra ny toerana andraisana ny Papa François, izay toerana an'ny Ekar fa noraisin'i Filoha Andry Rajoelina an-tanana ny fanamboarana azy, satria filoham-panjakana ihany koa ny Papa. Nambaran’ny Solontenan'ny Fiketrahana masina monina sy mipetraka eto Madagasikara, teo amin'ny Nonciature Ivandry, ny Alarobia 27 marsa tolakandro moa fa hanao fitsidihina apostolika eto Madagasikara ny Papa Ray Masina François, ny 6 ka hatramin'ny 8 septambra 2019. Avy atsy Mozambika ny Papa no ho avy hamangy an’i Madagasikara. Izy no Ray Masina Katôlika faharoa taorian’i Papa Joany Paoly II (1989) hitsidika an’i Madagasikara. Ny Fivondronamben'ny Eveka no mizaka ny fandaniana ara-bola, hoy ny Nonce Apostolique izay Masoivohon'i Vatican eto amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Notontosaina taty Masindray ny fambolen-kazo niaraka tamin'ny kandida ho solombavambahoaka Lanto Rakotomanga sy ireo mpiara-dia aminy. Tafiditra anatin'ny programanasan'ny Filoha Andry RAJOELINA tokoa izany hoy i Lanto RAKOTOMANGA, tsy maintsy mandray andraikitra isika hoan'ny taranaka fara mandimby ary koa hoan'ny firenena. Niara nientana ny tsirairay, na vavy na lahy, na tanora na be antitra tamin'ny fanatanterahana izany. Natao ihany koa izany fambolen-kazo izany ho firaisankinan'ny tsirairay ary ho mariky ny fifankatiavana.
Nanantanteraka fitsidihana ireo mpianatra monina eny amin’ny CUR Ambohipo ny kandida ho solombavambahoaka Lanto RAKOTOMANGA izay ao anatin'ny faritry ny boriboritany faha II iny toerana iny. Ontsa tateraka izy nahita ny trano ipetrahan’ireto mpianatra ireto, tsy vitan'ny efa kely ny efitrano, nefa mbola mahatratra hatramin’ny fito no miaramonina ao. Simba avokoa ireo fotodrafitrasa eny an-toerana ary tsy mendrika ny mpianatry ny anjery manontolo hoy izy ny mipetraka amin’ireto trano tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ireto. Nanana ny maha izy azy tokoa raha ny cite universitaire tamin’ny androny ary tokony ho modely eraky ny afrika sy izao tontolo izao izany mpianatry ny anjery manontolo izany.
samedi, 20 avril 2019 14:47
Andranomadio Toamasina: Nanohana ny fitsaboana faobe i Naharimamy Irmah
Mitohy hatrany ny fanampiana ataon'i Kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Naharimamy Irmah. Nanao hetsika goavana izy sy ireo mpiara-miasa aminy nanohana ireo mpitsabo, nitondra fanafody hitsaboana ireo olona rehetra mila izany. Maro tokoa ireo olona tsy afaka mitsabo tena noho ny tsy fisiana, ka niteraka fanentenana ho azy ireo izao fitsaboana faobe izao.
jeudi, 18 avril 2019 19:30
Ampela mijoro: Nifarana ny atrik'asa
Nofarana androany ilay atrik'asa notanterahan'ny Ampela mijoro, vehivavy misy fahasembana, momba ny fampanana asa, izay natao tetsy Analakely. Nisy ny dihy sy talenta maro nataon'izy ireo namaranana izany. (Jereo Sary Tohiny)
Nitrandraka volamena tany anaty lavaka hatrany amin’ny 19m izy ireo no nihotsaka tampoka ny tany tamin’ny sabotsy 13 aprily teo. Enina, tamin’izy folo lahy, ny razana hita. Mety hatsahatra ny fikarohana ireo razana sisa noho ny fahasarotan’ny fikarohana. Hasiana marika hita maso ho fahatsiarovana eo amin’ilay toerana namoizan’izy ireo aina. Raha tsiahivina dia olona folo no maty tototry ny tany ka ny 06 no hita faty raha nandamoaka kosa ny fikarohana ny efatra ambiny. Nandefa iraka amin’ilay toeram-pitrandrahana volamena nitrangan’ny loza ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika ny alatsinainy teo mba hijery ny zava-misy marina ary hitondra vahaolana, raha ilaina.
Manantanteraka atrik'asa mahakasika ny olana sedrain'izy ireo, ireto vehivavy misy fahasembanana ireto nanomboka omaly talata 16 aprily 2019. Maharitra telo andro moa izy ity ka hifarana ny alakamisy ho avy izao ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina. (Jereo Sary Tohiny)
Trano fianarana ho an’ny CEG miisa 14, lycée iray miaraka amin’ny tranon’ny kilasy mandry zazavavy mahazaka mpianatra 4, samy miampy fampitaovana, trano fivoahana sy vovon-drano ary zaridaina fambolena anana, ary làlan-tany mirefy 45km. Ireo no vokatry ny fampiasana ny Tahirim-bola ho an’ny fampandrosoana ifotony andiany voalohany na FDL (Fonds de Développement Local) teto amin’ny faritra Boeny. Tatitra nataon’ny Tale Jeneralin’ny FDL, Raharinjatovo Hanitra io raha nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny faritra Boeny mpisolotoerana, Bazezy V. Clavelah izy ny alakamisy 11 aprily 2019 tao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga. Mitentina 11 tapitrisa Euros no nanaovana ireo foto-drafitr’asa ireo. Kaomina miisa 14 sy ireo Fivondronamben’ny Kaomina ao amin’ny OPCI (Organisme Public de Coopération Intercommunale) eto Boeny no nampiasana io FDL andiany voalohany io.
vendredi, 12 avril 2019 12:30
Pierrot Matatagna: Mbola manohy fitsaboka ao amin’ny CHU Befelatanana
Mandalo sedra ara-pahasalamana mafy ity mpanakanto ity, ary mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly Befelatanana efa herinandro izao. Tonga namangy azy teny amin'ny hopitaly ny BR (Banjino ny Repoblika) tamin’ny alalan’ny Sekretera Jeneralin'ny antoko, ka nanolotra vola 1 tapitrisa Ariary ho fanampiana azy amin'ny fitsaboana izay ho ataony. Anisan'ireo mpanakanto izay efa niara-niasa tamin'ny BR i Pierrot Matatagna ary anisan’ireo mpihira maro avy amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany izay nomena sehatra ivelarana tamin'ny alalan'ireo hetsika Be Ready Event. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 12 avril 2019 12:13
Fampiananara: Ireo sekoly Katolika eto Madagasikara
Raha ny antontanisa (2017-2018) dia misy 478 ny «Préscolaire», nisy mpianatra 73 344 izay nosahanin’ny mpampianatra miisa 209. 2089 ny sekoly «Primaire» nahitana mpianatra 372 562 nosahanin’ny mpampianatra 9 808. 359 kosa ny Kolejy nahitana mpianatra miisa 149 806 teo ambany fiadidian'ny mpampianatra niisa 6 665, ary 138 ny Lycée nisy mpianatra 69 588 nosahanin’ny mpampianatra miisa 3 373. 22 kosa ny isan’ny sekoly ambony Katolika.